KZ ကိုသနားလို့ ဗုတ်တာ
ဘာပဲပြောပြော ဗုဒ်သွားတာကို ကျေးဇူးတင်ပါ၏။
ဒီမာ ကဗျာလေးတွေ ကောင်းတယ်။
ဗုဒ် လည်း ဗုဒ်မယ်။
ကျန်သေးတယ် ကျန်သေးတယ်..။ စိတ်ကြိုက်ရွေးယူလို့ ပြောပြီး ကဗျာတွေပို့လိုက်တာတောင်မှ ခုမှရေးပြီးပြီးချင်း ကဗျာပူပူနွေးနွေးလေးကို ဒါပဲယူမှာဆိုပြီး လာလုသွားတာလေ..။
တင်ဆက်ပုံလေးက ပြခန်းထဲကကဗျာတွေထက်တောင် အသက်ဝင်နေသေး…။ ခုဗုတ်မသွားရသေးဘူး…။ နောက်မှအေးအေးဆေးဆေး ကျကျနနဖတ်ပြီး ဗုတ်မယ်..။ ရွေးချယ်မှု မမှားရလေအောင်ပေါ့..။ ဟားဟားဟားးး..။
ထပ်မဖော်ကြနဲ့တော့ လေ။ တမီး တက်ကနိတွေကို …..
နောက် ပြခန်းအတွက်လည်း အသစ်ရေးပေးရမယ်နော်။
ခွိခွိ..ဒေါ်ဆွိ..အနော်တစ်ယောက်တည်းကိုများ ဓားပြတိုက်တာလားလို့…ကွိကွိ..အကုန်လုံးကို ဓားပြတိုက်ခဲ့တာပါလား…. (နည်းလမ်းရပီကွ.. :harr: ) ဓားပြခေါင်းဆောင် ဒေါ်ဆွိ… Bravo.. ပါ…
ပြခန်း တင် ဆက်ပုံ ကို မချီးကျူးပဲ မ နေ နိုင် ပါဘူးဗျာ
ဗယာ ကြော် ပါဗျ
ပြခန်း ( ၂ ) ကို
ကျွန်တော် တင်ပြ တုန်းက
ကျွန်တော့် ကဗျာ မပါ ခဲ့ဘူးး
ကျွန်တော့် ကဗျာ ကို အနုကြမ်း စီးပြီး ဆွဲယူ သွားတာလေ။
ပြခန်း ၃ မှာက တင် ဆက် မှုရော
အပြင် အဆင် နဲ့အစစ အရာရာ ရော
ဒီပြခန်း မှာမှ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ကဗျာ လေး တွေက
အ ရောင် အ သွေး တွေ ပို တောက်ပ ခမ်းနား သွားပါတယ်။
အဲဒီအတွက် ကျေနပ် စွာ ဂုဏ်ယူ ပါတယ်။
ပြခန်း ၃ ကို ချစ်စရာ ကောင်းအောင် ဖွင့် ပေး တဲ့
မမခိုင်ဇာ နဲ့သကြားးး
ကျုပ် ပြခန်း အလှည့်ကို အနစ်နာခံ ဦးစားပေးတဲ့ မောင်လေး ၂ ယောက်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့။
နောက်တစ်ခေါက်မှ ဆက် ရန်ဖြစ်ကြတာပေါ့။
မမဂျီး…မီးကဂျာဒွေ ဘာလို့ထည့်မပေးတာလဲလို့…. အထုပြန်ထည့်ပေး ပြန်ရေးပေးမယ်.
ဖူးတံဝင့်လို့ချီ နေခြည်မှာ ရွေရည်လောင်း နာဒို့စာသင်ဂျောင်းးးးးးးးးး အိုက်ဒါရယ်…ဖိုးတောင်သူ့တဲရယ်….မောင်ရေခဲရယ်…တစ်နှစ် စာကိုချစ်ရယ်..ထည့်ပေး ထည့်ပေး ..မထည့်ရင် နိုမှာနော်….
အဲလာတွေက လူကြိုက်များပြီးသား ကဗျာတွေမို့ အသစ်ရေးပေးပါ ဆရာမ ရယ်။
သမိန်ဗရမ်းသည် အမှန်တကယ် သူရဲကိုက်ခံထိ ပြီးသေသလော????
သရဲမ ချောချောမှ အကိုက်ခံမယ်တဲ့။
ဒီ သမိန် စည်သူ က…..
တက်ကနစ်ဒွေ အားဂျီး သုံးပီး ယူထားရဒဲ့ ကဂျာ ဒွေဘဲတော့ …
ဟို စကားလုံး ဆန်းဆန်းလေးနဲ့ ကဂျာလေးကို ဗုတ်မို့ …
“… ကျမဟာ …” ဆိုဒါလေ …
ဂလု .. ဗုတ်ရမှာ ရင်တုန်ချရာဂျီးးး
အဲဒီ တက်ကနစ်တွေတွေနဲ့ ကိုယ့်ကဗျာကိုရော မှတ်မိရဲ့လား:::
ကျမ ဟာ … ကို ဗုဒ်ရင် ဗုဒ်…
မ ဗုဒ်ရင် ကျမဟာ နဲ့တွေ့မယ်။
အဲလေ ပိုင်ရှင်နဲ့ တွေ့မယ်။
ကျုပ်ကဗျာ က ရသအမြောက်ဆုံး …ငြင်းမားးးးး
အဲလာလေး ကြည့်ရင်း ဗိုက်ဆာတယ်တော့။
ပုံတွေ သုံးတာက ကြိုက်တာ သုံးပါ မပျောပါဘူး
(ဟို ပေါင်တံရှီရှီနဲ့ မမလလ လေးပုံသာ ချမ်းသာပေးပါ)
ကဗျောင်တွေကတော့ ဘယ်ကဗျောင်တွေလဲဆိုတာလေးတော့ ပျောပါအူးစ်…
အဲဒီ ရှည်ရှည် ပုံက တော့ မကြိုက်လို့ ယူသုံးမှာ မဟုတ်။ စိတ်သာချ။ ကျော်ကြည့်တာ။
(နိ ကတော့ နာ့ ကို ကော်မန့်နဲ့ အဆဲခံရအောင် လုပ်ပြန်ပြီ)
ကျုပ်ဆီမှာ ၄ ပုဒ် ရှိတယ်။
ကြိုက်တဲ့ ကဗျာ ၃ပုဒ်ဆိုတာက ဘယ်လိုပါလိမ့် ..
ဘာမှန်းသေချာမသိလို့ ဖတ်တော့ပီးဘိ မမန့်ခဲ့ရသေးကြောင်းနဲ့
ကဗျာတိုင်းနီးပါးကို အကြိုက်တွေ့မိကြောင်း ဘူ့ဗုတ်ရမဲမသိတော့ဘူး
ကြိုက်ရာ ကဗျာ ၃ ပုဒ် အထိ မဲ ပေးလို့ ရတယ်လို့ ပြောတာပါ။
ကိုယ့် ကဗျာ လေး ဗုတ် အောင် မဲဆွယ်လို့ ရမလားးးဟင်
ရရင် တော့ မဲဆွယ်မယ်ဗျာ
ကျွန်တော့် ကဗျာ လေး ကို ဗုတ်ကြပါ ။
ဆုတွေ ဘာတွေ ရရ င် ဗုတ်သွား တဲ့ လူ တွေ ကို
သားသား ဝယ် စားမယ့် ဂျယ် လီ တွေ သကြားလုံး တွေ ကျွေး ပါ့မယ်
သားသား ကဗျာာ လေးကို ဗုတ် ကြ သူများ သိန်း တစ်ထောင် ထီ ဆု
ကဗျာနဲ့ ရေးသူကို အသိမပေးပါဘူး ဆိုမှ ဘယ် ကဗျာကို ဗုဒ်ခိုင်းနေတာတုန်း။
အလက်ဆင်း။ သတိ။ သတိ။
သား သား ကဗျာ နာမည်ကို ပြောပါဘူးးးဗျ
မဲ ဆွယ် ရုံ လေး ပါ
ကဗျာ နာ မည်ကို မပြောရသေးပါဘူး မမခိူင်ဇာ
ကိုကြောင်ကြီး ကဗျာများပါမလားရယ်လို့ ဗျာ
အရင်တစ်ပတ်က ပါတယ်လေ ကပေရေ။
လာမယ့်ကွန်ဖရင့်န့်မှာ.. ကိုယ်စီကိုယ်ငှ.. အသံနေအသံထားနဲ့..ရွတ်ကြပါလားဟင်င်…
ကျော့် ကြက်ဥလှည့် ကလောင်လေး ယူထားပါလားဟင်င်င်
ရွတ်ရအောင် ကိုငှက်လို အသံအေးအေး ဂရုဏာသံလေးနဲ့မှ ကဗျာက လှမပေါ့ဗျာ…
စကားမစပ် ဖိုးမောင်လာပြီကို ကိုကမ်းဝေးရွတ်တာ ကြားဖူးဇီချင်ဒယ်။
ကြက်သီး ဗူးသီးလုံးလောက်ထ သွားမယ်….
မဇာယိ ရွတ်ရင်တော့ သူ့ကို လိုက်ရှာလိမ့်မယ် ကြွေးတောင်းတဲ့ ကန်ပနီက စီအီးအိုခန့်ဖို့…
အစက တူပဲ ချိရှာ အသံလေးရှို။
ကဗျာဆိုတာ ရွတ်ချင်တိုင်း ရွတ်လို့ ရတယ်များ မှတ်နေသလားဟင်င်င်
အခြေအနေ အချိန်အခါ ရှိသဗျ
ရင်တွင်း ခံစားချက်နဲ့မှ အသက်ဝင်ပြီး ကြွတက်လာတာ…ဗျ
အဲသလို ခံစားချက်မျိုးက သဂျီးမှ ဖြစ်မှာမို့
လာမယ့် ကွန်ဖရင့်န့်မှာ သဂျီးကိုယ်တိုင် လာရွတ်ပေးဘာ…
အတွေး ကောင်း သလို အရေးလဲ ကောင်း တဲ့ မိန်းကလေး မို့ ဘရာဗို ပါ ကေဇီ ရေ။
ကဗျာ ဆိုတာ စာရေးသလို ရေးချင်တိုင်း ဘောင်လွတ် ရေးမရ တာမို့ တော်ရုံ မရေးနိုင် လို့ ထင်တာဘဲ။
ဒါကိုတောင် ရွာထဲ မှာ ကဗျာဆရာ တွေ အများကြီး ရှိနေတာ။
ဝါသနာတူ တွေ ပေါင်းစည်းမိတဲ့ ပွဲ ပေါ့။
အသေအချာ ဖတ်ပြီး နောက် မှ ပြန်လာ ဝုတ် မယ်။
အဲဒီ ကဗျာ တွေ ကို စု တုပြီး ခိုးကြည့် (မှားလို့) ပြုကြည့် ဦးမယ်။
အဲ့ ညို့မျက်ဝန်း ပိုင်ရှင် က ဘူသူတုန်း။
ပြန်လာ ဗုဒ် ပါဦး အရီးရေ။
မက်လုံးလေးက စကားလက်မက်လုံးထက် ပိုလှတယ်မဟုတ်လားဟင်င်င်င်??
ကျုပ်ကိုများ ရာရာစစ ပြခန်းစောင့် တဲ့
ဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့ ကဗျာချစ်သူက ထွက်ပလိုက်မယ် ဘာမှတ်လဲ ဟွန်း
ပိတ်သတ်ကြီး အားလုံးကို တစ်ခုတော့ တောင်းပန်ပရစီ
ပုံတွေကို တင်ပြရာမှာ ကျွန်ုပ်ရဲ့ အပျင်းကြီးမှုကြောင့် အနီးကပ်မှ ဟိုဟာပြင် ဒီဟာပြင် လုပ်လိုက်ရပါသဖြင့်
အဆင်မပြေတာများ ရှိပါက ခွေးလွှတ်ကြပါကုန်…………
သတ်ပုံအမှားများ တွေ့ရှိပါကလဲ စာကူးပြန်ရိုက်သူ သိကြားမင်း အိပ်ချင်မူးတူး ဖြစ်သောကြောင့် ဟု ယူဆကြပါကုန်
ဒီ တဂျားလေး အားကိုးနေရတာ။
နှစ်ဂျား ဆိုရင်တော့ မူးပြီပဲ။
ဖုန်းနဲ့မို့ ခန ပဲ ဝင်ကြည့်နိုင်သဗျို့. ။
လောလောဆယ်. ကျမဟာ ရဲ့ နှောင်ဖွဲ့မှုမှာ ..
နောက်ပီး ကဗျာ ရရေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရ ပုံ နည်းလမ်းလေးတွေတော့.
အလွတ်မှတ် သွားတာ ရယ်. ။
ဇဂါးမစပ်. နောင်ခါ ဘယ်ကတတ်လာဒယ် မမေးပါနဲ့.
အတော်များများ “ကျမဟာ” မှာ မိပြီ။
နောက်ခါ ဘယ်ကတတ်တုန်းမမေးဘူး။ ရိုက်မယ်။
ညကျ အေးဆေး ဘီဘီသောက်ပီး ခံစားဖတ်ပြီးမှ အေးဆေး ဘုတ်တော့မယ်ဂျာ..
ဂျီးဒေါ်လည်း စာရေးအားကောင်းပါလား… အပျိုကြီးတွေ
လူပျိုလေးတွေစိတ် အကဲခတ်တာ အရမ်းကောင်းတယ်..
ကိုရင်စည်သူ ဘုတ်ရတာကို ခရမ်းရောင်နဲ့ရေးထားတာ..
ကိုရင် ခရမ်းရောင်ကြိုက်မှန်း သူလေဘယ်လိုသိ..
ဘုတ်ရတဲ့အထိန်းအမတ်နဲ့… ဖတ်ရူ့သူအားလုံးအား… SW တစ်ယောက်
တစ်လုံး တိုက်ရင် ကတိပြုပါတယ်ခင်ညာ..
ပြန်လာ ဗုဒ် ရမယ်နော်။
ပြန်လာဗုဒ်ရင် ခရမ်းရောင်ကြိုက်သော ကိုရင်ကို ခရမ်းရောင်ရှိသော ခရမ်းသီးနှပ် ကျွေးမယ်။
တစ်ခုတော့ ဝင် ပြောလိုက်ဦးမယ်
(အမှန်တကယ်က ကြွားတာ ဟီဟိ)
(ဒါတောင် ပြပြချင်း ဗုတ်မထည့် ဟီဟိ)
ကော်ဖီထဲ အထည့်ခံရတော့မယ်. ။
ရွာ ကြီး..ဆမာကလာ မဖြစ်သေးဘူး ဟ ။
အခု ရွာထဲ.. ၀င်မရလို့ …
ပမာဒလေ ခ နေတဲ့တို့ ရွာသူားတွေ တစ်ပုံကြီး ရှိနေတယ် ။
နေ့ လည်ကတောင်.. ဟိုလူကြီး.မိုဘိုင်းးးး
ဘယ်လိုဝင်ရမလဲ..မသိ. ။ ၀င်မရလို့ ..ဆိုပြီး..ညည်းနေသေးတယ် ။
.org နဲ့ ..ပြောင်းဝင်နေရမှန်းတောင်.. မသိတဲ့လူတွေ ရှိတယ် ။
ကျွန်တော်ဆို…. .org နဲ့ လည်း ၀င် လို့ မရလို့ ..
Mail ထဲရောက် လာတဲ့ comment လင့်ခ် လေးကနေ…
တဆင့်.. ၀င်ရတာ ။
ဒီ ပြခန်း လင့်ခ်လေး..မမခိုင်ဇာ တင်ပေးထားတဲ့ ..
Facebook သွားပြီး.. ခက်ခက်ခဲခဲ..၀င်ရတာဗျ ။
ဒီ သကြားတော့ ကော်ဖီထဲ ထည့်ဖျော်မိတော့မယ်။
အခြေအနေခြင်းမတူတာကို လာပြီး အနိုင်ယူနေတယ်။
ဒီမှာ အားပေးသူနည်းလို့ ငိုချင်ရတဲ့ ကြားထဲ။
ကျမဟာ …….. ကို ကြိုက်တယ်………… ကဗျာကဗျာ ပြောဒါနော်… အဟီးးးးးးးးးးးးး
ကဗျာပြခန်းလေး မိုက်သဗျာ… လှည့်ပတ်မွှေနှောက်သွားတယ်နော….
ဒါနဲ. ကဗျာ ဆရာ နစ်နိမ်းတွေ ဘာလို.မထည့်တော့တာလဲဟင်… ကဗျာမှ အောက်ဆုံးက ကဗျာရေးသူ နစ်နိမ်းလေးက ထည့်မှပြည့်စုံမလားလို.ပါ….. ဘာလို.လဲဆိုတော့ ကဗျာလေးဖတ်ပြီး နောက်ဆုံး ကဗျာရေးသူ ကို နာမယ်လေးကြည့်ရတော့ အော် သူဒီလို ခံစားလို. ဒီလိုရေးတာပါလားလို. ပုံဖော်ကြည့်ရတာ ဒါအရသာ ပါဗျာ………….
ရေးသူနဲ့ ကဗျာ မတွဲရခြင်းက လူစွဲ နဲ့ ဗုဒ် မှာစိုးလို့တဲ့။
လာ အားပေးသွားတာကို ကျေးဇူးပါ။
အဲဒါကို က ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိတာ.. ကဗျာကို ကဗျာဆရာ နံမယ်နဲ. မတွဲတာ ကဗျာမဆန်လို.ပါအေ…
သူဟာလူ လူဆွဲဆွဲ ကျမဟာ ဆွဲဆွဲ… ဆွဲချင်သလောက်ဆွဲ တစ်ယောက် တစ်ဗို.ထ် ပဲ လေ….
မလိုအပ်တဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေ မထားကြပါနဲလားဗျာ………….
အနော်က ကလေးတွေ ခိုင်းတာ လုပ်ရတာရယ်။
ကဗျာကို ကဗျာဆရာ နာမည်နဲ့ တွဲပါသဗျ
ဒါပေသိ အခုပို့စ်မှာတော့မဟုတ် နောက်ပို့စ်မှာ ပြောပြမယ် အဟီး
မလိုအပ်တဲ့ စိုးရိမ်မှု မထားဘဲတော့ နေချင်ပါတယ်
ဗုဒ် သွားပါဦးနော်။ ဟီးဟီး။
ဗုတ်ပြီးတာကို ပြောဖို့ မေ့သွားတယ်။
အခင်းအကျင်း လှပတာကို စိတ်စွဲပြီးတော့……. :hee:
ကျေးဇူး ကြီးကြီးပါ ချစ်မမ။
အဟမ်း..ဂနေ့လည်းဝင်ပြီးတော့ ဗုတ်တုတ်တုတ် လုပ်တမ်းဆော့သွားပါဒယ်…. ပြန်လာရင် ၀က်သားဒုတ်ထိုးလေး မမေ့ပါနဲ့..ဆိုတာလေး.. ( ဂယ်ဒေါ့ ဟိုသဂျားကို အညင်ကပ်လို့..နာ့မမဂျီး နိုင်အောင်လို့..)
ဒါမှ နာ့ ရဲ့ ဗုံကလေးကွ။
ဒီ တစ်ခေါက် မန်းလေးလာရင်။
အယ် … မမခိုင်ဇာ ပို့စ်ဖတ်မိမှ ကဗျာ ပြခန်းဆိုတာ ဒါဘာလားလို့ သိတော့တယ်… ရှေ့မှာ လုပ်ခဲ့ပေမယ့်.. မ၀င်ခဲ့မိဘူးထင်တယ် ။ သတိမထားလိုက်မိဘူး .. ဟီး ။
စာလည်း မဖတ်ဖြစ်လိုက်တာများတော့ အပေါ်က ကဗျာတွေ တပုဒ်မှ မဖတ်ရသေးဘူး … ။
vote ချင်တာတောင် မvote နိုင်သေးတဲ့ အနေထားမို့ … စာတွေပြန်ဖတ်ပြီးမှ ပြန်လာ vote တော့မယ် ။
တုန်ကလေး ချစ်စရာကောင်းချက်ကတော့။ <3
ဘာပဲ ပြောပြော လာသွားတာကို ကျေးဇူးများဂျီးအားဂျီး တင်ပါတယ်လို့။
ပထမနဲ့ ဒုတိယပြခန်းကို ပြန်လာဘာ…….
ဒီ ဂျီးဒေါ် အကျော်ခံနိုင်ဝူး
ဘောင်တွေကို မုံးပေမဲ့ နှောင်ဖွဲ့မှုခံချင်သူတစ်ယောက်ကို vote သွားအိ…
အာ့ဒွေဂျောင့် ဝါး ကို ချစ်ရဒါ။
အားလုံးကိုခံစားပြီး သုံးပုဒ်ကိုဗုတ်သွားပါကြောင်းမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်။ သူ့ထက်သူလူစွမ်းကောင်းချည်းမို့ အားလုံးကိုတမျိုးစီကြိုက်ပါတယ်။
မွမွသဲ ကို ကျေးဂျူးတင်ဘာဒယ်။
ရောက်အောင်လာတာကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် မွအိ ရယ်။
ပရိုမိုးရှင်း လုပ်တဲ့ အနေနဲ့
ဗုတ်တဲ့ သူ တွေကို ပို့စ် ပိုင်ရှင်က အာဘွားပေးနေတယ် သတင်းကြားလို့
ဗုတ်ပြီး စောင့်နေတာ ဘယ်သူမှ မဘာမှလဲ မဘာဘူး
သေချာအောင် နောက်နေ့မှ ပြန်လာစောင့်တော့မယ်
မသိလို့ပါ ကိုနို လူဇိုးဂျီး:::::
အာဘွား::း အမြှောက် တစ်သိန်း
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ ချစ်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။
စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း နဲ့ အတူ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ချစ် သော
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ချစ် သော မြန်မာ ပြည်သူ/သား များ ကို
ကျိန်စာဆိုး ကြီး ထဲ မှ ကယ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါစေ။
သူမ မွေးနေ့ အတွက် အမှတ်တရ
သူမ ရဲ့ ဘာသာပြန်ကဗျာ (အကယ်၍)
If . . . by Rudyard Kipling
ရှင်ဟာလဲ ကျွန်မတို့အတွက် တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရတဲ့ ထာဝရ ခေါင်းဆောင်ကောင်း သူရဲကောင်း ပါဘဲ။
မနက်ဖြန် အချိန်မရ ခဲ့ မှာ စိုး လို့ ကြိုပြီး Wish လုပ်လိုက်ပါသည်။
ကဗျာခန်း ကို အလွဲ သုံးစား လုပ်မိတာ ခွင့်လွှတ်ပါ ဟေ့။
ဒီ ကော်မန့်အတွက် အင်မတန် ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ဗျာ။
သတိရတဲ့ စိတ်ကိုလည်း ချစ်မိပါတယ်။ <3
နက်ဖြန် မွေးနေ့ အတွက် ပို့(စ) တစ်ခုတော့ စကက်ဂျူးလုပ်ထားပါတယ်။
Thanksalot ကေဇီ။ :-)
ရွှေကြည်ရွာကိုအပြင်ကပဲ ပတ်ပြီး မ၀င်ဖြစ်လို့ပါ။
ကြိုက်တာကတော့ နှောင်ဖွဲ့မှုကင်းလွတ်ခြင်းကဗျာပါပဲ ဒါပေမယ့် အပြင်ကနေ၀င်ဗုတ်လိုက်တာက တခြားတပုဒ်ဖြစ်သွားတယ် နောက်တခုကို အဓိပ္ပါယ်လေးကြိုက်လို့ အားလုံးကတော့သူ့သဘောနဲ့သူကောင်းနေတာပါပဲ။ လေးစားပါတယ် ရွာသူားတို့ အစ်မရေးထားတာလဲဖတ်လို့ကောင်း၏
အထက်က လို မေတ္တာစာမျိုး ပို့ လျှင်လက်ခံပါသလား
အဲ့ဒီ အပိုင်းက အလင်းဆက် မှ သိမှာ။
mingalarbar လေးလေး ကျော်သိန်း ရေ။
လေးလေးရဲ့အထက်က ပိုစ့်ကို ကျွန်တော် သွား ဖတ် လိုက် ပါတယ်။
ကဗျာ ပြခန်း နဲ့ ကျတော့ အဲဒီ လို ရေးဟန် မျိုးက သိပ် မလိုက်ဖက် ဘူး လို့ 
ယူဆ မိပါ တယ်။
အဲဒီ လို သ ရော် စာ ရေးဟန် လေးကိုပဲ
ကဗျာ ဟန် လေး နဲ့ 
ကဗျာ ဆန်ဆန်လေး ရေးပြီး
ပြခန်း အတွက် ချီးမြှင့် စေ ချင် ပါတယ် ခင် ဗျ ။
လေးလေး ကျော် ရေ
ကဗျာ ဆန်အောင် မရေး တတ်ပါဘူး ဆိုသူတွေ
ရေး တဲ့ ကဗျာ က
ကဗျာ ပိုဆန် တာ သိ ပြီးသားး
ရေး ပေးပါ ။
ပို့ ပေးပါ ။
Vote List ထဲမှာ “အာဇာနည်ဗိမာန်” လဲ ပါဘူး ။
ဗုဒ်လစ်(စ) မှာ မထည့်ဘူးတဲ့။
မမခိုင်ဇာ… အမှန်အတိုင်းပြောရင် ကဗျာဆိုတာကိုယ်ဘယ်လိုမှမမှီတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပေမယ့် မှီသလောက်လေးကို ဗုတ်သွားတယ်..
ခရစ်(စ) လေးမလာလို့ မျှော်နေတာဗျ။
ကျော့် ကဗျာစီးရီးစ် ပို့ချင်လို့ခည
အစ်မရေ.. ညပိုင်းဆို ဆိုဒ်ထဲလုံး၀၀င်မရဘူး.. ခါတိုင်းထက်အရမ်းခက်နေတယ်.. ကျမတစ်ယောက်တည်းဖြစ်လားလို့ အခုကွန်မင့်တွေဖတ်မှ အကုန်ဖြစ်မှန်းသိတာ..
ဟုတ်ပါ့။ ခရစ်(စ) ရယ်။
အမဖြင့် ဒီ ကာလမှာ မဖွင့်မဖြစ်လို့သာ ပြခန်းဖွင့်လိုက်ရတယ်၊.
ဦးနှောက်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပေါင်းစပ်မှုနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာပါ…
ကျွန်တော့ရဲ့ နှလုံးသားအဆီအနှစ်တွေကို အမှတ်တရဖြစ်အောင် ဖော်ပြခွင့်ပေးသော…
ကဗျာအဖြစ် ဖန်တီးပြီး သုံးခွင့်ပေးသော
ကိုဂျီးဖက် ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကဗျာတွေ ပို့လို့လည်း ရပါတယ်၊။
ကဗျာပြခန်း ပို့စ်တွေထဲကို ခုမှပဲဝင်ဖြစ်တယ်နဲ့တူတယ်ဗျာ…..
ကဗျာပြခန်း ၀ိုင်းတော်သားတွေရဲ့ အလုပ်ကလည်း တှယ်မလွယ်လှသကိုး….
ဓါပြတိုက် အနုကြမ်းစီး မက်လုံးပေး ဘွဲ့လက်မှတ်ရထားသူတွေလောက်မှသာလျှင်
ကျုပ်လည်းရောက်လာပြီးသည့်သကာလ စိတ်ကြိုက်ကဗျာသုံးပုဒ်ကို ဗုဒ်ထားခဲ့လေသတည်း…..
ပြခန်း အမှတ် ၃ ထိ ချီတက် လာနိုင် ပါပြီ ။
ရှေ့ ဆက် ဖို့ လည်း အား မာန် အပြည့် နဲ့ စီစဉ် ထား ကြပါတယ် ။
လူငယ် တွေ ရဲ့ ကဗျာ ချစ်စိတ် သီးသန့် နဲ့အ ကောင် အထည် ပေါ်လာတဲ့
အနုပညာ ပြခန်း တွေ
တစ်ခန်း ပြီး တစ်ခန်း ထပ် ထပ် ဖြစ်တည် လာဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြခန်း ၁ ကို ချစ်သော ဦးမာဃ ဦးဆောင် ဖွင့်လှစ် ခဲ့ ပါတယ်။
ပြခန်း ၂ ကို ကျွန်တော် အလင်းဆက် အိုးနင်းခွက်နင်း နဲ့ ဖွင့် ပြ ခဲ့ပါတယ်။
ပြခန်း ၃ ကို ချစ်သော မမခိုင် ဇာ က လှလှ ပပ ဖွင့်လိုက် ပါ ပြီ ။
လာ မယ့် ပြခန်း ၄ ကို
ကဗျာ ချစ်သူ နောက် တစ် ယောက်က
ဖွင့်ပြ ဦးမှာ ဆိုတော့
ဘယ်လို များလဲ လို့ 
ကြိုတင် ရင် ခုန် နေပါပြီ ။
ခေါင်း မခြောက် ပါ နဲ့
သူ့ မှာက ဖြင့်
အနုနည်း တွေ ရော
အကြမ်း နည်း တွေ ရော
အစုံအစိ ရှိ နေတာ ကို
ရွာထဲရောက်ဖို့တော်တော် ကြိုးစားလိုက်ရတယ်
ပြခန်းတစ်ခုကို တစ်မျိုးရသ ပေးနိုင်ပဗျာ
အခက်အခဲကြားက အရောက်လာနိုင်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါသည်